एउटा गालीको असर: जर्जले बुर्ज खलिफामा किने २२ वटा भब्य घर - Karobar National Economic Daily
एउटा गालीको असर: जर्जले बुर्ज खलिफामा किने २२ वटा भब्य घर
query_builderFebruary 11, 2017 9:06 AM supervisor_accountकारोबार visibility15573
बुर्ज खलिफा अगाडि जर्ज भी नेरियापरामबिल । तस्बिर: हिन्दुस्तान टााइम्स
काठमाडौँ: भनिन्छ कसैसँग बोल्दा शब्दको प्रयोग सोचेर सम्झेर मात्रै गर्नुपर्छ । शब्दले प्रायस मानिसमा गहिरो छाप छोड्छन् । यस्तै केही शब्दको तिखो वाणले एक मानिसलाई सफलताको शिखरमा पुर्याइएदिएको छ ।
'विष नभएको सर्प र इख नभएको मान्छे' भन्ने उखानझैँ आफूमाथि बर्सिएका गालीबाट पाठ सिकेर अघि बढेका एक व्यक्ति अहिले सफलताको शिखरमा पुगेका छन् ।
यस्तै केही गालीयुक्त शब्द पनि मानिसको सफलताको कारण बन्छ भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । कसैले गरेको गालीकै कारण आज एक व्यक्तिले विश्वकै अग्लो दुबईस्थित गगनचुम्बी बुर्ज खालिफामा आफ्ना लागि आलिशान २२ वटा महल खरिद गर्न सफल भएका छन् ।
गाली पनि सफलताको कारण ? कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ, जहाँ पुग्नका लागि मानिस सपना मात्रै देख्छन् । एक व्यक्ति गाली खाएपछि त्यसलाई पाठका रुपमा लिएर अघि बढ्दा जहाँ पुगेका छन्, त्यहाँ पुग्ने सपना धेरैको अधुरै रहन्छ ।
जर्ज भी नेरियापरामबिल नामका भारतीय मेकानिक अहिले त्यही सफलताको शिखरमा पुगेका छन् । उनले यो यात्रा आफ्नो मेहनत र हिम्मतको बलमा तय गर्न सफल भएका हुन् ।
हो, यिनै व्यक्तिका आज विश्वकै सबैभन्दा अग्लो (८२८ मिटर) भवन 'बुर्ज खालिफा' मा २२ वटा फ्ल्याट रहेका छन् । उनी यो ९०० फ्ल्याट रहेका यो भवनमा सबैभन्दा धेरै फ्ल्याट किन्ने मध्ये एकजना हुन् ।
यिनको बालककाल भारतको केरलामा धेरै सङ्घर्षपूर्णरुपमा गुज्रेको थियो । सन् १९७६ मा केरलाबाट दुबई पुगेका उनले सुरुमा आफ्ना पितासँग सानातिना ब्यापारमा सघाएका थिए ।
साथै आफ्नो पनि सानो कारोबार गर्थे ताकि धेरै पैसा कमाउन सकियो् । जब उनी ठुला विश्वमा बढिरहेको तापक्रमका कारण बढिरहेको तनावबीच उनले एयर कन्डिसनको ब्यापारमा हात हाले ।
गर्मी ठाउँमा एयर कन्डिस्निङको व्यापार उनको गजबले चल्यो । आज उनको यही बिजनेस जीईओ ग्रुप अफ कम्पनी बनिसेको छ ।
उनले यो गगनचुम्बीमा किन फ्ल्याट किने त ? यको कथा पनि धेरै रोचक छ । आफ्ना नातेदारले दिएको एक गालीले उनको मनमा चोट पुग्यो । त्यही गालीको इखले आफूले संसारकै अग्लो भवनमा यतिधेरै फ्ल्याट किनेर सफलताको शिखरमा पुगेको सन्देश दिएको बताएका छन् ।
एक नातेदारले उनलाई यस गगनचुम्बी भवनमा कहिल्यै पस्न पनि नस्कने भनेर गाली दिएका थिए । आफूले गाली खाएको भोलिपल्टै उनले पत्रिकामा एक विज्ञापन देखे, जसमा बुर्ज खालिफामा फ्ल्याट भाडामा मिल्ने उल्लेख थियो ।
जर्जले त्यही दिन बुर्ज खलिफामा फ्ल्याट भाडामा लिए अनि त्यहीँ बस्न थाले । विस्तारी विस्तारी उनले बुर्ज खलिफामा आफ्ना लागि २२ वटा फ्ल्याट नै किन्न सफल भए ।
जर्ज यतिमै रोकिन चाहँदैनन् । उनी त्यहाँ अन्य फ्ल्याट किन्न चाहन्छन् । भारतको केरमा जन्मेका उनी भारतमा प्रकृतिका लागि काम गर्न चाहन्छन् ।
दुबई व्यापार बुर्ज खलिफा